तल दम्कल, आर्मी प्रहरी तयारी अवस्थामा देख्दा रु’वा’बासी चल्यो, ज्या’नको माया मा’रेका थियौं ! – Online Khabar 24
तल दम्कल, आर्मी प्रहरी तयारी अवस्थामा देख्दा रु’वा’बासी चल्यो, ज्या’नको माया मा’रेका थियौं !
September 27, 2021 by admin admin
विराटनगर विमानस्थलमा अ’वतरण हुन नसकेर पुनः काठमाडौं नै फर्किएको बुद्ध एयरको जहाज सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सकु’शल अव’तरण भएको छ।
विमान सकु’शल अवतरण भएसँगै ठूलो दु’र्घटना टरेको छ।
ल्यान्डि’ङ गियर’मा स’मस्या भएपछि विराटनगरमा जहाज अव’तरण हुन सकेको थिएन। त्यसपछि उक्त ७३ यात्रु सवार जहा’ज पुनः काठमाडौं नै फर्किएको थियो। काठमाडौं फर्किँदा सम्म पनि विमानको सम’स्यामा सु’धार नआए पछि विमान काठमाडौंकै आकाशमा घु’मिरहेको थियो।
सोमबार बिहान ८ बजेर ३३ मिनेटमा काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको अल्फा नोभेम्बर इन्डिया जहाज विराटनगरको आका’शमा दुई फन्को लगाएर काठमाडौं फर्किएको थियो।
काठमाडौं स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार विमानको एउटा पां’ग्रा नखुले’का कारण अव’तरण हुन सकेन र केही समय ‘झन्डै २ घण्टा’ आका’शमै हो’ल्ड हुन परेको थियो।
काठमाडौं आएपछि आकाशमा झन्डै १० फ’न्को लगाएको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० बजेर २० मिनेटमा सुरक्षि’त रूपले अ’वतरण गरिएको बुद्ध एयरले जनाएको छ। यसरी बुद्ध एयरको जहाज आज ठूलो दु’र्घट’नाबाट बचेको छ भने ७३ यात्रुको जी’वन सु’रक्षित बनेको छ।
यात्रुको अनुभव यस्तो छ । बुद्ध एयर आज अवत’रण हुन नसकेपछि विमान आ’काशमै हुँदा यात्रुहरुको रु’वाबा’सी चलेको एक यात्रु अनमोल प्रधान बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘विमान अ’वतरण अब होला अब होला भन्दा भन्दै विमान अव’तरण हुन सकेन। विमानमा यात्रुहरु रु’न र क’राउन थालेका थिए। जसका कारण नडरा’एका मानिसहरु पनि आ’त्तिन थाले। केही मानिस बे’हो’स भएका थिए।’
उनी रुँ’दै भन्छन्,‘हामीले हाम्रो ज्या’न जो’गिन्छ भनेर आ’शा मा’रि’सकेका थियौं। विमान अवतरण हुने बेला त्यहाँ तल दम्क’ल, आ’र्मी प्रह’री तयारी अवस्थामा देख्दा ज्या’न जान्छ’ भन्ने सोचेका थियौं। हामीलाई भगवा’नले मात्र ब’चाएको जस्तो लाग्छ। भगवान पशुपति नाथको कृपाले बाँ’च्यौं। हामी सबै हात जोडेर भगवान स’म्झिँ’दै बसिरहेका थियौं।’ यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevपहिलो भेटमा विवाह गरे, महिनौं पछि श्रीमती पो’र्न स्टार रहेको थाहा पाएपछी ….
nextजब एयर होस्टेजले रुँदै भने, ‘तपाईहरूलाई बँचाउन सक्दो कोसिस गर्छौं, इन्धन सकेर धावनमार्गमा फम राखेर ल्याण्ड गराउँछौं’